Story | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 9
လင်ကြက်တွန်သံနဲ့အဆုံးမှာ အိပ်မောကျနေတဲ့ ရွာကလေးသည် ဟိုတစ်စဒီတစ်စလူတွေနိုးထခြင်းနဲ့အတူ သက်ဝင်လှုပ်ရှာလာလေသည်….တစ်ချို့လယ်ထဲဆင်းဖို့ပြင်တဲ့သူကပြင်..တစ်ချို့ထမင်းချက်တဲ့သူကချက်နဲ့..ပန်းတစ်ပွင့် ရေထိလိုက်သလို လန်းဆန်းမူအပြည့်နဲ့ သမိုင်းထဲကနေ့တစ်နေ့ကို ဖြတ်သန်းဖို့ ဤ ရွာကလေးသည် အသင့်ဖြစ်နေလေခဲ့ပြီ….
“မယ်လှ ဒီနေ့ လက်သမားတွေကိုမနက်စာထမင်းကြမ်းကျွေးဖို့ပြင်ထားဦးနော်…”
“ဒါတော့ဒါပေါ့မိန်းမရာ သူတို့အပေါ်စေတနာထားတော့ ကိုယ့်အပေါ်လဲစေတနာပြန်ထားမှပေါ့…”
“တော်ပါတော့ ကိုလှမြိုင်ရယ် စေတနာထားထားမထားထား ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး..ပိုက်ဆံပေးထားတာ ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ကတော့ ဟော့ဒီက မယ်လှ ပါးစပ်နဲ့တွေ့သွားမယ်….”
ကိုလှမြိုင်တစ်ယောက်စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ပြန်လှဲနေလိုက်တယ်..ပြောလို့လဲရမည်မဟုတ်..သူမိန်းမ မယ်လှအကြောင်းသူအသိဆုံး…ဟူး…သက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုချပြီ…
“ဟဲ့အကောင်းတွေ နင်တို့ကနောက်ကျလှကြီးလား သူများပိုက်ဆံယူထားပြီ အလုပ်ကိုစောစောလားမှပေါ့..တကယ်တည်းမှပဲ သူတို့ကိုသူတို့ရှင်ဘုရင်းများအောင်မေ့နေလားမသိဘူး…ပြောမပြောချင်ဘူး….”
သူ့မိန်းမ မယ်လှ အသံကြောင့် မှေးနေတာကနေ ကိုလှမြိုင်မျက်လုံးဖွင့်ပြီ ခြံဝကို ကြည့်လိုက်တယ်…အိမ်ဆောက်မဲ့လက်သမားတွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ခြံထဲဝင်လာတာတွေလိုက်ရတော့အားနားပြီ…
“တော်ပါတော့မိန်းမရယ်…သူတို့လဲ..တစ်ခါတစ်လေနောက်ကျမှပေါ့..သိပ်လဲနောက်ကျတာမှမဟုတ်တာ ၁၀ မိနစ် လောက်လေးပဲဟာကို…”
“အို..တော်လို့ရမလား သူများပိုက်ဆံယူထားရင် ဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ…”
“တောင်ပန်းပါတယ်အမရယ် ဒီနေ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်..ဒီအတွက် ညနေနောက်ကျပြီးမှအလုပ်သိမ်းပေးပါမယ်…”
ပြောပြောဆိုဆို ကော့ပတ်ကော့ပတ်နဲ့ ခြံပြင်ထွက်သွားတယ်…
“အကိုတောင်ပန်းပါတယ်ကွာ..အကိုမိန်းမက ပါးစပ်ဆိုးပေးမဲ့ စိတ်ရင်လေးကောင်းပါတယ်…”
လက်သမားတွေလဲလုပ်စရာရှိတာလုပ် နားစရာရှိတာနားနဲ့ အိပ်ဆောက်ခြင်းကို အစပြုနေလိုက်တယ်….
“ဟဲ့..အကောင်တွေ ဘာထိုင်လုပ်နေတာလဲ…သူများပိုက်ဆံယူထားပြီ ဒီလိုထိုင်နေလို့ရမလား…”
ဘယ်အချိန်အပြင်ကပြန်ရောက်လာမှန်မသိသော မယ်လှအသံက ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်လို့ပေါ်ထွက်လာတော့သည်…
“မဟုတ်ပါဘူး အမရယ် နေကအရမ်းပူလို့ ခဏနားနေတာပါ..အမအိမ်ကို သက်မှတ်ရက်အတွင်းပြီးအောင်ဆောက်ပေးပါမယ်…”
ပါးစပ်က ပွစိပွစိနဲ့ ဆိတ်အစာစားသလို့ မနားတမ်း ပြောပြီထမင်းသွားထိုင်ချက်နေတဲ့ မယ်လှကိုကြည့်ပြီ ကိုလှမြိုင်ရင်တော်တော်ရင်လေးမိတယ်….
အရက်ခွက် ကိုစားပွဲပေါ်စောင့်ချပြီ…လက်သမားဆရာ ကိုအောင်ကြီး ပြောလိုက်တယ်…
“ဘယ်သူရှိရမှလဲ ဟိုဂျမ်းတော့မ မယ်လှပေါ့ကွ…”
“အေးဟုတ်တယ်..ဒီကောင်မက အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုပြီ မောက်မာနေတာ…”
“ဒါဆို လာသွားမယ် ငါ့ဆရာဆီကို…”
နှစ်ယောက်သားပြောပြီ အရက်ဆိုင်ထွက်ကာ ဆရာဆိုတဲ့သူရှိတဲ့နေရာကိုထွက်လာလိုက်တယ်….
“ဟို အိမ်ပဲ…လာ “
အိမ်က ဗူးသီးပုတ်စက်သေနပ်မှန်ထားသလို ထရံတွေကကျို့တို့ကျဲတဲ..ရိုရိုရွဲရွဲ..ညှီစို့စို့နဲ့…ခြံတိုင်တွေမှာလဲ လူဦးခေါင်းခွံတွေလား ဘာဦးခေါင်းခွံတွေမှန်မသိချိတ်ထားလေရဲ့…ခြံထဲတိုင်မှာ ချည်းထားတဲ့ ခွေးနက်ကြီးတစ်ကောင်ကလဲ သူတို့ကိုစားမတက်မဝါးမတက်ကြည့်နေတာ ကြက်သီးထချင်စရာ…
“ဟေ့ကောင် မင်းဟာကဘာလိုအိမ်လဲ ဟုတ်မှလဲလုပ်ဦးနော်…”
“ဟုတ်ပါတယ်..ဒါအောက်လမ်းတက်တဲ့ ဆရာကြီးအိမ် ငါ့ဆရာ….”
“ကျွန်တော် ဖိုးသာအို ပါ…”
အိမ်ထဲကိုစဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျောရိုးထဲစိမ့်ကနဲ့ပဲ…ဘုရားစင်မရှိ…လူဦးခေါင်းခွံပေါ်မှာ ထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်အလင်းရောင်အောက်မှာ ဖိုးသာအိုဆရာကိုတွေ့ရတာ သရဲကိုတွေ့ရသလိုပဲ…ကျို့တို့ကျဲတဲ ဆံပင်တွေကို အရိုးတစ်ချောင်းနဲ့တွဲစည်းထားတယ်..သွားမတိုက်လို့လားမသိဘူး မဲသည်းနေတဲ့ သွားတွေက ဟိုတစ်ချောင်းဒီတစ်ချောင်း…အနံတွေကလဲ အော်ကလီဆန်းပြီ အံပါအံချင်တယ်…
“ဒီလိုပါ ဆရကြီး လူတစ်ယောက်ကို ပညာနည်းနည်းပေးချင်လို့ပါ…”
“နည်းနည်းပါးပါးပါ ဆရာကြီး…အိမ်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာ နည်းနည်းထဲပေးချင်လို့ပါ…”
ဆရာကြီးဆိုသူခေါ်ဆောင်ရာနောက် လိုက်လာလိုက်ကြတာ တစ်အောင့်လောသွားမိတော့ သူတို့ဦးတည်နေတာ သင်ချိုင်းတစ်ခုဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်..ဘာများလုပ်ဖို့ပါလိမ့်..ဆရာကြီးဆိုသူက ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဘာတွေရှာနေမှန်မသိ..အချိန်ကလဲ ည ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ..အောင်ကြီးလိုက်သာလိုက်လာရတယ် ကြောက်တာကတော့ပြောမနေနဲတော့….ရုတ်တရက် ဆရာကြီးဆိုသူက.
“ဒီမြေပုံမှနေတဲ့အကောင်ဆို အတော်ပဲ..သာအို အဲ့မြေပုံက မှတ်တိုင်ကိုဖြုတ်လိုက် နာမည် အသက်ပါ ပါပစေ..ပြီရင် ငါ့ကိုပေး…”
ဆရာခိုင်တဲ့အတိုင် မြေပုံကမှတ်တိုင် ပျဉ်းချက်ကို ဖြုတ်လိုက်တယ်…
ပျဉ်းချင်ကိုယူပြီ မြေပုံဘေးမှချ ဖယောင်းတိုင်နဲ့ လိုအပ်တာတွေထုတ်ပြီ လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ် မန်းစရာရှိတာတွေမန်းနေတဲ့ ဆရာကြီးဆိုသူကို အောင်ကြီးပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေမိတယ်…
“ကဲ လုပ်ငန်းစမယ် မင်းတို့စည်းမဖောက်ကြနဲ့နော်..ကြားလား..”
“ဥုံ………….ဥုံ………ငါ့ဆရာအမိန့်ကိုနာခံ ခုချက်ခြင်းငါခိုင်တာလုပ် မလုပ်လို့ကတော့ ငါဆရာအကြောင်းသိစေရမယ် ခုချက်ခြင်း င့ါရှေ့ရောက် ဒါငါဆရာအမိန့်….”
စကားဆုံးပြီ သိပ်မကြာခင်လောက်မှာ မြေပုံထဲကနေ နီနီရဲရဲအကောင်းကြီးတစ်ကောင် ထွက်လာတာ ထွန်းထားတဲ့ ဖရောင်းတိုင်မီးအောက်မှာ အတိုင်းသားမြင်နေရတယ်…အောင်ကြီး ကြောက်လွန်လို့ လိပ်ပြာတောင်လွင့်မတက်ပဲ…မကြောက်ခံနိုင်ရိုးလာ..ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဒီလိုနာနာဘဝတွေနဲ့နှဖူးတွေ့ဒူးတွေတွေ့နေရတာ….
“ဟုတ်ပြီ..ဟုတ်ပြီ… ငါ့ဆရာအမိန့်ကိုနာခံ ဒီပျဉ်းချက်နဲ့အတူလိုက်သွား အဲ့မှနေ အဲ့အိမ်က မယ်လှဆိုတဲ့ မိန်းမကို………………”
အမိန့်သံဆုံးရော အကောင်ကြီးကပျဉ်းထဲကိုတိုးဝင်သွားပြီ ပျဉ်းချက်ကသိသိသာကိုလှုပ်ခါနေတယ်…
“ငါဆရာအမိန့်နာခံ ခုချက်ခြင်း ပျဉ်းချက်ပြန်ငြိမ်…..”
ပျဉ်းချက်ပြန်ငြိမ်သွားတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နဲ့ ဆရာဆိုသူက….
အသံနက်ကြီးသည် သင်ချိုင်းတစ်ခုလုံး ပဲတင်ထပ်သွားလေတော့သည်…..
မယ်လှကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီ အောင်ကြီး မြေခွေးပြုံးပြုံးလိုက်တယ်…ပြီးတော့ ဖွတ်ယူလာတဲ့ ပျဉ်းချက်ကို လူမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှ ကပ်ရိုက်ပြီ ဟန်မပျက်တစ်ခြာအလုပ်တွေဆက်လုပ်နေရင်စိတ်ထဲမှာတော့ သိကျပြီပေ့ါ မယ်လှ ရာ….
“ကဲ့ အမ အိမ်လဲပြီးပြီ နေချင်တက်နေလို့ရပြီ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်အရေးတကြီးကိစ္စ ခရီးသွားစရာရှိလို့ ပြန်လာမှပဲလုပ်ပေးမယ်…”
“အောင်မလေးနော် တစ်ခါတည်အပြီးလုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး..တကယ်တည်းမှပဲ..ကြွကြွ..လက်ခကိုလဲ အဲ့တော့မှယူ…”
အောင်ကြီးပြောပြီ လက်သမားပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်ပြီ ခပ်သုတ်သုတ်ပြန်လာလိုက်တယ်…
“ကိုလှမြိုင် အိမ်မှ တက်နေလို့ရပြီတဲ့..”
“မယ်လှကလဲ ဘုန်းကြီးတွေဘာတွေပင့် ပရိတ်တွေဘာတွေရွတ်ပြီးမှနေပါလား…”
“အို..တော်ကလဲ ကျူပ်ကအဲ့လိုအယူတွေမရှိဘူး နေမှပဲ ရှင်မနေရင်ကြိုက်တဲ့နေရာသွားနေ….”
ပြောပြောဆိုဆို အိမ်သစ်ကြီးပေါ်တက်သွားပြီ အိမ်ကြီးကလှည့်ပတ်ကြည့်နေလိုက်တယ်…..
“နီ…နီရဲရဲကြီး အကောင်တစ်ကောင် ထုတ်တန်ပေါ်ကနေ ကျူပ်ကိုကြည့်နေလို့…. “
မယ်လှ မျက်လုံကိုပွတ်ပြီ ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်…ဘာမှမရှိတော့…ငါပဲမမြင်မှားတာလား…မဟုတ်ပါဘူး စောစောကသေသေခြားခြားမြင်လိုက်တာပါ…ကိုလှမြိုင်ကိုကြည့်တော့လဲဘာမှမမြင်သလို့..ငါအမြင်မှာတာနေမှာပါလေ….ညနေစာစားပြီ လင်မယားနှစ်ယောက် အချစ်တလင်းမှ စစ်ခင်းဖို့ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြပြီ မောမောနဲ့အိပ်မလို့လုပ်တုန်း…
ဗြုန်းဆို အေးအေးစက်စက်လက်ကြီးတစ်ခု ကခြေထောက်ကနေကိုင်ပြီ ကုတင်အောက်ဆွဲချလိုက်ပါလေရော…
“ကျူပ်…ကျူပ်ကို အေးအေးစက်စက်လက်ကခြေထောက်က ကိုင်ပြီကုတင်းပေါ်ကဆွဲချလို့….”
သူယောင်္ကျားပြောလို့ ရေဆေးဖို့ အိမ်နောက်ရေကပြင်ကိုထွက်ပြီ ခြေထောက်ရေဆေးနေတုန်း…
“ကျူပ်…..ကျူပ်ကို နီးနီးရဲရဲအကောင်းကြီးက အိမ်ပေါ်ကနေ လျှာထုတ်ပြလို့…..အစွယ်ကြီးကလဲတစ်တောင်လောက်ရှိတယ်….ကျူပ်ကြောက်တယ်….ကျူပ်ကြောက်တယ်…..”
မကြောက်နဲ့လို့သာပြောရတယ် သူမိန်းကကိုယ်ကကြောက်လွန်းလို့အေးစက်နေတော့ စိတ်ထဲမှတော့ဇဝေဇဝါ….
“ကို…ကို…ကိုလှမြိုင် ရှင်ကြားလာ အိမ်ရှေ့ဧည်ခန်းမှ လူတစ်ယောက်ပြေးနေတာ…”
“မကြားပါဘူး မင်းတစ်ယောက်တည်းကြားနေတာပဲ ဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လား….”
“ဟင်း…ရှင်မကြားဘူး ….ကျူပ်ပဲကြားနေတာ…ကယ်ပါဦးရှင် ကျူပ်ကိုပဲခြောက်နေတာသေခြာပြီ….”
“အောင်မလေးးးးး ကိုလှမြိုင် ဟို…..ဟို….မှာ….မှာ…..နီနီကြီး လျှာတန်းလန်းနဲ့ ထုတ်တန်းပေါ်က ဇောက်ထိုးကြီးဆင်းလာတယ်…..”
“ကယ်ကြပါဦး…ကျူပ်ကိုသတ်တော့မယ်….အောင်မလေး ကျူပ်ကို သတ်နေပြီး…..အောင်မလေးနီနီကြီး……နီနီကြီးအမွှေးတွေနဲ့…….အားးးးးး လျှာတန်းလန်းကြီးနဲ့…….လုပ်ပါဦး……ကျူပ်ကိုစားတော့မယ်….ကြောက်တယ်..ကြောက်တယ်……နီနီကြီး…..အစွယ်တွေနဲ့…….”
မျက်ဖြူကြီးလန်ပြီးတော့ အော်နေတဲ့ မယ်လှကိုကြည့်ပြီ ကိုလှမြိုင်ဘာလုပ်လို့ဘာကိုရမယ်မှန်မသိတေ့ာ…
“လုပ်ကြပါဦး မယ်လှကို ဆွဲကြပါဦး….”
မယ်လှတစ်ယောက် ကတော့အသံထွက်တစ်ချက်မထွက်တစ်ချက် မျက်လုံးပြူ “မျက်စံပြူနဲ့….နီနီကြီး….လျှားတန်းလန်းနဲ့….အစွယ်တွေနဲ့……….လည်ပင်တက်ညစ်နေပြီ…….”
အဖွားအိုတစ်ယောက် ရောက်လာပြီ လက်ထဲကရေမန်းနဲ့ ပတ်တော့မှ မယ်လှတစ်ယောက် ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်..လူကဖြစ်မျော့မျော့ပဲကျန်၏…
“ဒီအိမ်မသန့်ဘူး လူတွေ အားလုံးအပြင်ထွက် အပြင်ထွက်”
အဖွားကြီးအသံအဆုံးမှာ မယ်လှကို ပွေ့ပြီ အားလုံးအိမ်အပြင်ပြေးထွက်ကျတယ်…
အသံမျိုးစုံနဲ့အိမ်ကြီးမှာ တော့ ဝုန်းတိုင်းကျဲပြီ ကျန်ခဲလေရဲ့…..
“ဟိုဘတ်ရွာက ဆရာဦးရွှေအောင် ကိုသွားပင်ကြ..”
ညတွင်းချင်ပင် ဆရာသွားပင်ကြပြီ ထမင်းတစ်အိုးကျက်လောက်မှာ ဆရာဦးရွှေအောင်တို့ ရောက်လာကျတယ်…
“ဟာ….ဒီအိမ်မှာ အစိမ်းသရဲရှိနေပါလား တော်တော်အကောင်ကြီးနေပြီ လူကိုပါ အန္တာရယ်ပြုနိုင်နေပြီ…နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး….လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ် မန်ထားတဲ့အပ်ချည်ကို တစ်အိမ်လုံးအပြင်ကနေပတ်လိုက်ကြ ဒီကောင်ကြီးက အိမ်အောက်ကိုဆင်းပြီး တစ်ရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးတော့မှာ မြန်မြန်လုပ်…”
သူတပည့်တွေကိုလဲ အော်ပြီခိုင်းစရာရှိတာခိုင်း သူကလဲ ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်းနဲ့……..
အားလုံးပြီးတာ့ ဦးရွှေအောင် ဘုရားတရားသံဃာ အထက်ဆရာကြီးတွေကို တိုင်တည်းပြီ စလုပ်တယ်ဆိုရင်ပဲ….
ဝုန်း……ဝုန်း….နဲ့ အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးသွပ်သွပ်ခါးအောင်လှုပ်ရမ်းပြီ နီနီအကောင်ကြီးသည်ထွက်လာကာ စည်းတားထားတဲ့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့သည်…ဘေးမှကြည့်နေတဲ့သူတွေလဲ အတိုင်းသာမြင်နေရတယ်…
“ဟုတ်ပါရဲ့ အစွယ်ကြီးတွေကလဲ တစ်တောင်လောက်ရှိတယ်…”
“ဟဲ့ အစိမ်းသရဲ နင်ကအာခံတယ်ပေါ့….ဟုတ်လား…ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်…”
အထက်ဆရာကြီးတွေဆီမှ တိုင်တည်ခွင့်တောင်းပြီ နောက်ဆုံးလုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့မှာ သောင်းကြမ်းနေတဲ့ အကောင်ကြီးကငြိမ်ကျသွားတော့တယ်….
“အေးအေး နင်ကို ငါတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမူလုပ်ပြီ ကောင်းရာသုဂတိသွားအောင်လုပ်ပေးမယ် နင်သာဓုခေါ်…အရင်ဘဝကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ အစိမ်းသရဲဖြစ်ရတယ်..ဒီဘဝမှလဲဒါတွေဆက်လုပ်နေရင် အဝေစီဂျိုးကပ်နေမယ်..ကြားလာ…”
“သားလှမြိုင် အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ထုတ်တန်းမှာရိုက်ထားတဲ့ပျဉ်းချက်ကိုခွါလိုက် အဲ့မှာနံမည်းပါရေးထားလိမ့်မယ်…”
“ကဲ…ကဲ…..အားလုံးပဲ အနှောင့်အယှက်ကင်းသွားပါပြီး မနက်ကြရင် ဆရာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီ ကောင်းမူကုသိုလ်လုပ်ပြီ အမျှဝေပေးတာပေါ့….”